That said, one of the most promising areas that Ethereum can deliver in is the culture arena. More than ever, artists and creators need new ways to guarantee their finances on their own terms, and Ethereum dApps can deliver such avenues. That’s where I -udiyo uyangena.
7 amaminithi adlule
I-Bitcoin iyaqhubeka namarekhodi we-2020 futhi emahoreni ambalwa adlule amake ukuphakama okusha okungaphezulu kwama- $ 13,350. Izimali eziningi ezihlukile zilandelwe ngokunyuka okumangazayo, kepha imakethe yehlile kusukela lapho. Imakethe yonke ye-cryptocurrency ivalwe ngaphezulu kwama- $ 400 billion.
I-Bitcoin To Yet Another 2020 Ephakeme
I-CryptoPotato kubika ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ukuthi i-cryptocurrency eyinhloko yeqe ukuphakama okungu-Agasti 2020 okungaba ngu- $ 12,500 futhi kwafinyelela ku- $ 13,200. Okulandelile ukubuyela emuva okuncane cishe kwaba ngama- $ 13,000 nokuma izolo.
Noma kunjalo, ukungazethembi kubuyile emahoreni angama-24 adlule, futhi i-BTC ibheke phezulu. Ngalesi sikhathi, iBitcoin yephule ngaphezu kwe- $ 13,350. Eqinisweni, ngokusho kwedatha evela eBitstamp, ukuphakama okusha kwe-BTC kwe-2020 ku- $ 13,362.
Okunye ukwenqatshwa okubukhali kwalandela, futhi impahla yatholwa kafushane ngaphansi kwe- $ 13,000. Yize kunjalo, lezi zinkunzi selokhu zayiqhuba ngaphezu kophawu olufiselekayo, kanti iBTC ihweba cishe ngamaRandi ayizi-12,940 XNUMX.
Ukuphoqelela ishadi okusanda kuvezwa ukuthi iBitcoin yakha iphethini yekhanda namahlombe eguqukayo. Uma izodlala, i-cryptocurrency kungekudala ingakhuphuka futhi iqhubekele phezulu futhi ibe phezulu ngama- $ 20,000 aphakade kunayo yonke.
Uma lesi simo sizokwenzeka ngempela, iBitcoin kuzofanele yeqe ngaphezu kwe- imigqa yokumelana ku- $ 13,420, $ 13,500, $ 13,815, naku- $ 14,000 ngaphambi kokufinyelela amarekhodi amasha.
BTC / USD. Umthombo: TradingView
Ama-Altcoins Alandela Futhi Azolile
Izinhlamvu zemali eziningi ezihlukile zabhekana nokwehluleka okufanayo njengeBitcoin. U-Ethereum ukhuphukele kwisonto elisha le-7 eliphakeme cishe lama- $ 420. Kodwa-ke, i-ETH ibuyele emuva ngokushesha futhi manje isizulazula cishe ngama- $ 409 futhi.
Izinga eliphakeme kakhulu likaRipple lifike cishe ku- $ 0,26, kepha i-XRP isivele yehla yaze yaba ngaphansi kuka- $ 0.253.
Ngakho-ke, esikalini samahora angama-24, ama-altcoins amaningi amakhulu ahlala ezindaweni ezinjengezolo, yize kuyehla intengo emfushane. AbakwaChainlink noLitecoin babhalise izinzuzo eziningi ezibalelwa ku-3.6%. I-LINK ihweba cishe ku- $ 12.35, kanti i-LTC ibekwe ku- $ 56.3.
I-Cryptocurrency Market Heatmap. Umthombo: Qoqa i-Crypto
Umuntu othole umxhwele kakhulu kusukela izolo uFilecoin. Ngemuva kwamuva impikiswano nokwehla kwentengo okuqhubekayo, i-FIL inyuke ngo-45% emahoreni angama-24 edlule.
I-Ocean Protocol (18%), i-Quant (17.5%), i-THETA (10.2%), ama-Reserve Rights (10.2%), ne-Ampleforth (10%) nazo zikhuphuke ngamaphesenti aphindwe kabili.
Ilungu lebhodi leRipple kanye nomngani osondelene nomndeni kaMengameli waseMelika uDonald Trump, uKen Kurson, baboshiwe kulandela izinsolo zokusebenzisa i-cyberstalking.
Ngokusho kwi-New York Times, uKurson uye wacupha futhi wahlukumeza ingqikithi yezisulu ezinhlanu, kubandakanya nowayengunkosikazi wakhe.
Kubikwa ukuthi ubenolaka kakhulu ebhekise kumngani walowo owayengunkosikazi wakhe, abemsola ngokuhlukanisa kwakhe. Usebenzise amagama angombombayi ukuxhumana nesibhedlela abesebenza kuso nokuthumela ama-imeyili enkohliso athi uthandana nomphathi wakhe. UKurson uphinde waqala isikhukhula sezibuyekezo ezingezinhle zeYelp, esongela ama-imeyili, nezingcingo nemiyalezo engaziwa kwabanye abasebenzi besibhedlela.
Owesifazane wathi uKurson usebenzise amaqhinga afanayo kwesinye isisulu sowesifazane, owaxoshwa emsebenzini. Isikhalazo sobugebengu siphinde saqinisekisa ukuthi isisulu sesibili ngowayengunkosikazi kaKurson.
Uphiko lwenkohlakalo emphakathini lwehhovisi labameli baseMelika eBrooklyn lusingatha leli cala. Ijaji lidedele uKurson esitokisini kusalindwe ukuqulwa kwecala lakhe.
UKurson ungumngani omkhulu womkhwenyana kaDonald Trump uJared Kushner. UKushner wayekade eqoke uKurson njengomhleli omkhulu ngesikhathi ephethe iThe New York Observer ngo-2013.
Ku-2018, abaphathi bakaTrump banikeze uKurson isihlalo ebhodini leNational Endowment for the Humanities. Ngemuva kwesheke elijwayelekile lemvelaphi evela kuFederal Bureau of Investigation, uKurson uhoxile ekucabangeni.
Kurson wajoyina ibhodi labaqondisi eRipple ekuqaleni kuka-2017. Lesi simemezelo sigqamise ukuthi uKurson ungomunye wabatshalizimali bokuqala kule nkampani.
Isithombe Esifakiwe Ngokuzithoba kwe-CNBC